सुकुम्बासी समस्या दिगोरुपमा समाधान गर्नुपर्छ : डा. भट्टराई - Baikalpikkhabar
सुकुम्बासी समस्या दिगोरुपमा समाधान गर्नुपर्छ : डा. भट्टराई
चितवन, २५ असोज / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासी समस्या दिगोरुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रकारसँग आज यहाँ कुराकानी गर्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
सोमबार, २५ असोज, २०७८, दिउँसोको १२:१५ बजे